Xaflada Dhagaxdhiga Mashaariicaha Degmada Cusub ee Galxamur. - Cakaara News
Xaflada Dhagaxdhiga Mashaariicaha Degmada Cusub ee Galxamur.
Galxamur(cakaaranews) Sabti, 26ka March, 2016, Wafti uu hogaaminayay wasiirka xeer ilaalinta guud iyo cadaalada DDSI mudane Cabdijamaal Axmed Qolonbi oo ay wehelinayaan masuuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Maxamuud Cali ayaa ka qaybgalay xaflada loogu dabaal-dagayo daah-furka degmada cusub ee galxamur ee gobolka Doolo.
Waftigan oo si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay degmada cusub ee galxamur ayaa xafladaasi kula hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qaybgashay dabaaldaga xafladan lagu daah furayo degmadan cusub.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay xafladaasi wasiirka xeer ilaalinta guud iyo cadaalada DDSI mudane Cabdijamaal Axmed Qolonbi oo ugu hanbalyeeyay xaflada dabaaldaga degmadan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan cusub ee galxamur. Wuxuuna sheegay in ay xukuumada DDSI dadaal xoogan ugu jirto sidii ay shacabka deegaanka uga saarilahayd saboolnimada. Wuxuuna tilmaamay masuulku in degmooyinkan cusubna yihiin kuwo qayb wayn ka qaadanaya hirgalinta hawlaha horumarka. Isaga oo ku booriyay bulshada in ay ka qay-qaataan hirgalinta hawlaha horumarka degmadan cusub ee garxamur.
Waxaa kale oo ka hadlay xafladaas qaarkamida bulshadii ka qaybgashay oo ay ugu horeeyaan suldaamada, ugaasyada, cuqaal iyo haweenka kuwaasi oo aad usoo dhaweeyay xaflada degmada cusub ee galxamur iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin degmada cusub ee loo ansixiayay islamrkaana ay u mahad celinayaan dhamaan masuuliyiinta DDSI ee uu ugu horeeyo Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, XDSHSI, iyo hogala Baarlamaanka DDSI